Tag: istaraatiijiyada warbaahinta bulshada | Martech Zone
Tag: istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada
Sideen ugu bilaabaa baraha bulshada? Tani waa su'aal aan sii wado markaan helayo markaan kahadlayo saamaynta ay baraha bulshada ku leeyihiin dadaalka suuq geynta ganacsiga. Marka hore, aan ka wada hadalno sababta ay shirkaddaadu u rabto inay ugu firfircoonaan warbaahinta bulshada. Sababaha ay Ganacsiyadu u Isticmaalaan Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada Halkan waxaa ah fiidiyow sharraxa weyn oo ku saabsan 7 dariiqo oo suuqgeyntaada warbaahinta bulshada ay u wadi karto natiijooyinka ganacsiga. Sida Loogu Bilaabo Bulshada
Matt Cutts wuxuu la wadaagay fiidiyoow halkaas oo uu uga hadlay caqabadda injineerada laga yaabo inay yeeshaan haddii ay abuuri lahaayeen ku-tiirsanaan udhaxeysa Google algorithms-ka iyo calaamadaha bulshada. Marka la soo koobo, waxay noqon laheyd mid aad khatar u ah in la dhiso ku tiirsanaantan haddii ay dhacdo barnaamijka kale ee warbaahinta bulshada ama la joojiyo raadinta ama uu ku dhacay caan. Shaki iigama jiro inay arintu sidan tahay, laakiin xanta ayaa sii socota sida xirfadlayaasha mashiinka raadinta ay inta badan u arkaan isku xirnaan udhaxeysa